Ị nwere ike ịgwa m ihe kacha mkpa SEO isiokwu aro?
N'ụzọ dị mwute, ọ dịghị ihe ngwọta zuru ụwa ọnụ ma ọ bụ izugbe SEO mkpado iji mee ka ọdịnaya gị zuru oke ma ghara ịbụ oge ochie. N'ezie, na-agbaso melite ọ bụla na-agagharị na nchọta algorithm nke Google, enwere ihe dị iche iche na nyocha ọchụchọ nke na-eme ka ị gbanwee ihe ndị ahụ a gbanwere maka nyocha nhazi ọ bụla ọzọ. Nke a bụ ise kasị mkpa SEO isiokwu Atụmatụ iji mee ka ọdịnaya gị na-eme nke ọma na mgbe niile na-ụbọchị - computer experts corp.
Nọgidenụ na-echezi ogologo okwu ogologo
N'ikpeazụ, a pụrụ iji isiokwu ndị ahụ mee ihe dị ka ihe dị mfe ma dị mkpirikpi (e. g. , okwu kachasị mma) ma ọ bụ maka mkpịsị ugodi nke ogologo oge na-eweta mmadụ atọ ma ọ bụ karịa (e. g. , kacha mma Keywords m SEO blog). Echere m ebe a ị ga-ahụ nkwụsị ahụ kwesịrị ekwesị site na iji ụdị isiokwu ndị dị oke mkpa. Nke a bụ ihe atụ maka gị. Nke mbụ, isi okwu (otu okwu ọbụla) na-echekarị okwu asọmpi siri ike. N'ịtụle okwu mkpịsị ogologo oge, enwere asọmpi kachasị ike banyere ha, ma a na-etinye ha n'ajụjụ ọchụchọ ọ bụghị otú ahụ. Ọ bụ ya mere ngwọta kachasị mma ebe a ji aghọta ndị na-ege gị ntị n'ụzọ doro anya ma tinyezie mkpirisi okwu ogologo oge nke a ga-eji mee ihe.
Ọdịnaya ọdịnaya bụ nsogbu
N'agbanyeghị ụfọdụ ntụle isiokwu SEO nwere ike ịgwa gị ka ị ghara ime nke a, agaghị aga maka ihe kachasị elu maka mgbaru ọsọ gị. Ime ka ọdịnaya gị jikọta ya na isiokwu, ị ga-enwe ọtụtụ ihe odide gị anya dịka ụda ma ọ bụ enweghị oke. N'ihi ya, enwere ike ịchọta ọdịnaya ọdịnaya gị, ya mere ị ga-eweda ogo ọdịnaya gị. Chefu oge ochie, mgbe Google na-arụ ọrụ site na nkà mmụta sayensị nke SEO. Ugbu a, algorithm ọchụchọ na-achọpụta ọdịnaya dị mma na-atụle njirimara ọkachamara ka mma karịa ụdị ọrụ ọ bụla. Ya mere, ị ga-echefu ihe nrụgide isiokwu ahụ ozugbo na maka ihe niile.
Tinye nlezianya anya maka mkpa ndị ahịa gị
Adịtụla etinye mgbalị gị na ngalaba ọ bụla nke SEO, ọ dịkarịa ala na-arụ ọrụ na ọdịnaya gị. Naanị cheta - ị na-eme ihe dị mma maka ndị na-agụ akwụkwọ, ọ bụghị igwe. Echere m ebe a na edere ihe ọ bụla ị dere iji jeere ndị na-ege gị ntị. Ma ọ bụrụ na ịnweghị ike iche n'echiche ndị nwere ike ịme ihe na-eme ọchụchọ maka isiokwu gị, ị ga-adị mma ịtụle ịghọ ndị ọhụrụ. Naanị lekwasị anya na ịmepụta ọdịnaya dị mma, n'ihi na ugbu a, enwere ike inye gị ọkwa dị elu site na mkpa, ọ bụghị ederede isiokwu.
Na-ebuli ndepụta gị dị ugbu a nke isiokwu ndị bụ isi
Nke a bụ otu n'ime ndụmọdụ SEO kachasị mkpa anyị maka taa. Ihe bụ na ihe ka ọtụtụ n'ime anyị na-eche na ị ga-echefu ihe dị ukwuu, yabụ na ị nwere ike nyochaa nhazi nke isiokwu gị ugbu a. Naanị kpochapụ okwu ndị a na-adịkarị na-efunahụ ugboro ole ojiji. Ọ bụrụ na ịnweghị obi ike banyere ihe a ga-ewepụ, ana m akwado iji otu ngwaọrụ ndị na-emeghe iji nweta nyochaa okwu gị n'ogologo.Ma mụ onwe m, achọpụtara m na Google Planner kacha mma. Mana ịhọrọ ngwá ọrụ kwesịrị ekwesị bụ naanị gị. E kwuwerị, ihe ka ọtụtụ n'ime ha na-arụ ọrụ otu ihe ahụ.